Wasaarada arr/dibada oo meel uga dhacday sharciga caalamiga ee diblomaasiyada – Warfaafiye:
Wasaarada arr/dibada oo meel uga dhacday sharciga caalamiga ee diblomaasiyada
Ali Mohyadin Nov 11, 2017 0
Wasaaradda Arimaha Dibadda Soomaaliya ayaa bilowday magaacisbta Soomaalida Qoxootiga ku ah South Africa.
Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday inay magaacaawdo Soomaalida qoxootiga ku ah dalka South Africa iyadoo sharci ahaan qof magangalyo uu wadan kale siiyay ama qoxooti ah in aanay noqon karin shaqaalo dowladeed.
Warar aan ka helnay shaqaalo ka tirsan wasaaradda Arimaha Dibadda ee Soomaaliya, ayaa xaqiiyay in Wasiir ku /xigeenka Wasaaradda Arimaha Dibadda Soomaaliya, Mukhtar Mahad Daud uu si hoose u magaacabay nin heysta Sharciga Qoxootinimada South Africa oo lagu magacaabo Saalax Maxamed balse ku joogo Mustafa Maxamed.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in magacaabidaan ay hareer marsan tahay sharciga maadaama aan lagala tashan Wasiirka Arimaha Dibadda Yusuf Garaad Cumar.
Saalax Maxamed oo ay isku jifo yihiin Mukhtar Mahad Daud ayaa ku noolaa South Africa muddo ka badan 15 sanno in mudo ah ka shaqeynayay Daarta weyn ay Soomaalidu ku leedahay magaalada Johannseburg ee loo yaqaano Amal Shoping Center.
Dowladda South Africa ayaan wali lasoo gaarsiin magaacibistan waxaana jira Diblomaasiyiin ka tirsan Safaaradda Soomaaliya ,ay ku leedahay dalkaasi oo wali Qoxooti ah balse ay Dowladda South Africa ka warqabin.
Dowlada South Africa ayaa la filayaa hadii ay ogaalato arintaan in ay maxkmad la tiigsato masuulkaan la magacaabay, kuna weyn karo sharcigii qaxootiga ahaa in lagala laabto iyada oo ciqaab iyo masaafuris la isugu dari karo maadaama asaga oo sharci magangalyo ka heystay dalkeeda uu ku laabtay dalkii uu kasoo cararay uuna doonayo in uu ka shaqeeyo dowlada iyo dalki uu kasoo cararay shalay.